Ubar Oo Lagu Eedeeyey Basaasnimo Iyo Tuugo Ay Ku Smayso Farsamada Ay U Adeegsato Hawlaheeda – Heemaal News Network
Uber ayaa lagu eedeeyey inay samaysay qayb shirkadda ka tirsan oo loo xilsaaray inay soo basaasto sirta qolyaha uu tartanku kala dhaxeeyo, kuwaasoo ay si qarsoodi ah xogtooda u uruuriyaan, sida lagu xusay warqad ay shaacisay maxkamad Maraykan ah Jimcihii.
Arrintan ayaa caddayn muhiim ah u noqonaysa loollanka Uber kala dhaxeeya shirkadda kale e Waymo, oo ah shirkad samaysa gawaarida is wada, taasoo Uber ku eedeysay inay tiknoloojiyada ka xadday.
Warqadda, oo ay direen qareenno wakiil u ahaa qof hore ugu shaqayn jiray Uber, ayaa dhalisay in la sameeyo baaris gudaha ah markii loo diray shirkadda Uber bishii May, hase yeeshee dadweynaha looma soo bandhigin ilaa iyo wakhtigaas.
Qoraal ay Uber soo saartay ayaa lagu yiri “Inkastoo aynaan caddayn u haynin eedeymaha ku qoran warqadda, iyo kuwa la xiriira Waymo, hogaankeenna cusub wuxuu caddeeyey in aan si xaq ah oo daacad ah u tartamayno innagoo hore u soconna, kuna tiirsan afkaarteenna iyo tiknoloojiyadeenna”.
Eedeymaha warqadda ku qoran waxaa jeediyey Richard Jacobs oo u shaqaynayey Uber ilaa bishii February ee sannadkan. Wuxuu ka tegey shirkadda, ka dib markii ay dhacday arrin uu u arkay in si aan caddaalad ahayn darajadiisa hoos loogu dhigay.
Markii dambe ayaa lagu xalliyey arrinta in Mr Jacobs la siiyo 4.5 Malyan oo Doollar, ka dibna wuxuu sheegay in wixii uu qoray qaarkood aysan run ahayn, gaar ahaan kuwa ku saabsan xogta sirta ah ee Waymo.
Soo ifbaxa “warqadda Jacobs” ayaa weji kale u yeeshay kiiska u dhaxeeya Uber iyo Waymo kaasoo uu qorshuhu ahaa in la billaabo horraantii bishan, laakinse dib loo dhigay ilaa bisha Febraayo.
Dalka Rwanda Oo Laga Mamnuucay Cabista (Dhuuqista) Shiishadda, Biyaha La Nuugo Oo Laga Helay Monoxide
Ciidamada Sahnuuniyiinta Oo Kursiga Curyaamiinta Ku Dul Toogtay Mujaahid Ay Horay Lugaha Uga Jareen
February 28, 2018 Farsamada
Shirkada Facebook ayaa baddeleysa halka ay wararkeeda ku daabacdo si ay uga hortagto wax ay ku sheegtay wararka dhaliya xiisadaha iyo marin habaabinta. Madaxa shirkadda Mark Zuckerberg, ayaa sheegay in bartu haatan kaddib weydiin doonto […]
Dayaarad Air Fracne Leedahay Oo Mashiin Burburay Iyadda Oo Hawadda Ku Jirta
October 1, 2017 Farsamada
Mid kamid ah diyaaradaha shirkadda duulimaadyada ee Air France oo ka soo duushay magaalada Paris ee dalka Fransiiska, kuna sii jeeday gobolka Los Angeles ee dalka Mareykanka ayaa ku qasbanaatay inay ka weecato halkii ay […]